Darawalada xilkasnimada leh ayaa khalkhal galiya adeegyada taraamka ee Bursa | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaDarawaliinnada aan cidhiidhi ahayn ee ku yaal Bursa ayaa safar gaaban ku tagaya
09 / 03 / 2014 16 Bursa, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY, taraamka
Darawalada aan xilkasnimada aheyn ee Bursa waxay carqaladeeyaan howlaha taraamyada: Tram-yada taraamyada waxay adeegooda bilaabeen bishii Oktoobar ee sanadkii hore magalada Bursa sababta oo ah darawalada aan mas'uuliyada aheyn ee gawaaridooda dhigta wadada tareenka waqti ka waqti.
In kasta oo ay jiraan digniiniyo ka imanaya kooxaha taraafikada iyo muwaadiniinta, qaar ka mid ah darawallada ayaa gawaaridooda dhigta khadka taraamyada. Rakaabku waa inay sugaan taraamka oo aan ku imaan waqtigii loogu tala galay dartiis.
Waardiyeyaasha amniga ee khadka T1 ayaa wacaya booliiska oo weydiista caawimaad. Kordhinta tirada duullimaadyada iyo qaadashada kumanaan rakaab ah maalin kasta, Xirmooyinka Silkworm, ayaa sheegaya in aysan shaqo badan ku jirin qaabkii gawaarida loo dhigto qaab darawallada, muwaadiniinta ayaa sababta falcelinta.
Darawaliinta aan khatarta laheyn ayaa carqaladeynaya safarada taraamka
Iyadoo ay jirto sababo la xiriira darawalnimo aan loo dulqaadan karin duulimaadka tarmac ee magaalada Bursa ayaa la joojiyay
Darawallada Bursalı ayaan loo isticmaali karin rooga gudaha ee Silkworm
Wadooyinka wadooyinka ku soo noqonaya Moolka
Darawaliinta ayaa u digay tareenka xawaaraha sare
Darawaliin waligood laguma baranin shilalka tareenka
Darawaliintu way gubteen hadda!
Darawaliinta Erzincan oo laga cabsi qabo in laga digto
adeegga gawaarida bursa
Darawaliinta Diirada! Waddooyinka Shidaalka ah ee la xirayo Taraafikada
Kahramanmaraş Drivers Attention! Arsan Isbeddelka Wadada Sadax Maalmood